🍒FastPay Amakhasino - Isiza Esisemthethweni, Ukubhaliswa, Amabhonasi 2021
FastPay Casino >FastPay Online Casino - Izindawo ezihamba phambili kanye nezinkokhelo ezisheshayo endaweni eyodwa
FastPay Online Casino - Izindawo ezihamba phambili kanye nezinkokhelo ezisheshayo endaweni eyodwa
Ukubuyekezwa Kwewebhusayithi Esemthethweni ye-FastPay
Ukuthengiselana kwezezimali e-FastPay casino
Izinhlobonhlobo zemishini ye-slot ku-FastPay
Amabhonasi nokunikezwa kokuphromotha kwamakhasimende we-FastPay
Amakhasino aku-inthanethi FastPay yiphrojekthi entsha yokugembula eyethulwe nguDama N.V. Amakhasino amaningi aziwayo asebenza ngaphansi kokuphathwa kwakhe. IFastPay inelayisense yomhlaba ekhishwe yiCuracao Gaming Commission. Amakhasino aku-inthanethi ahlolwa njalo ukwethembeka futhi asebenzisa imishini yama-slot enamalayisense kuphela. Le phrojekthi igxile kusevisi esezingeni elifanele kanye nezinkokhelo ezisheshayo
Isayithi eliyinhloko lekhasino lisendaweni yesizinda se-COM. Amanye amazwe adinga amaphrojekthi wokugembula aphesheya ukuthi athole ilayisense lendawo, ngaphandle kwalokho amasayithi abo ayavalwa. Ukweqa leyo mikhawulo, kunesibuko se-FastPay - lesi yisayithi elengeziwe elingafani nelikhulu ekusebenzeni nasekubonakalayo. Umehluko kuphela isizinda.
Isayithi le-FastPay lenziwe ngemibala emnyama. Izinkinobho nemidlalo kuphela ezinokwakheka okukhanyayo. Imenyu ephezulu imelwe ngamathebhu:
"Mayelana Nathi" - iqukethe imininingwane emayelana nekhasino;
"Ukusekelwa" - kukuvumela ukuthi ushiye isicelo sensizakalo yokusekela;
"Izinkokhelo" - amasistimu okukhokha asekelwayo, imingcele yediphozi nokuhoxiswa ikhonjisiwe lapha;
"Promo" - isigaba sivezwa ngolwazi mayelana namaphromoshini amanje, amabhonasi, imibandela yokwamukelwa kwabo;
"Imiqhudelwano" - ikhasino ihlala iphatha imiqhudelwano phakathi kwamakhasimende ayo, esigabeni ungathola imininingwane mayelana nemiqhudelwano yamanje neyesikhathi esizayo.
Phezulu kukhona nefomu lokungena ngemvume, inkinobho yokuvula iwindi lokubhalisa. Ekhoneni eliphezulu kwesokudla kunenkinobho yokukhetha ulimi. I-interface ihunyushelwe olimini lwesiRussia, isiNgisi, isiJalimane, isi-Ukraine, isiPolish, isiFinnish, iSpanish, isiCzech, isiJapane, isiMalay, isiFulentshi, isiNorway, isiTurkey.
Isibhengezo semininingwane sithatha ingxenye ebalulekile yekhasi eliyinhloko. Nayi iminikelo yokushicilela eshicilelwe, imininingwane eyisisekelo ngomsebenzi wekhasino
Ngaphansi kwesibhengezo kunezixhumanisi eziya ezingxenyeni eziyinhloko zekhasino, kukhona indawo yokwamukela izivakashi enemishini yama-slot neminye imidlalo. Zonke izikhala zingahlolwa ngemodi yamahhala - akukho ukubhaliswa okudingekayo.
Ezansi kwewebhusayithi ye-FastPay yekhasino kunemenyu eyinkomba, exhumanisa nezigaba ezinolwazi olusemthethweni. Kuphoqelekile ukutadisha imithetho nemibandela yomdlalo ngaphambi kokubhalisa.
Lapho uvakashela isayithi kusuka kudivayisi ephathekayo, isikhombimsebenzisi sivumelanisa ngokuzenzakalela nosayizi wesikrini. Lokhu kukuvumela ukuthi udlale imidlalo oyikhonzile yokugembula kusuka kuthebhulethi, i-smartphone ngokukhululeka okukhulu.
I-FastPay online casino inikeza 24/7 ukwesekwa kwamakhasimende. Ungacela usizo nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Ukwesekwa kwezobuchwepheshe kuyasiza ekubhaliseni, ekugcwaliseni kabusha i-akhawunti, njll.
Ikhasino linikeze iziteshi zokuxhumana eziningana:
ingxoxo eku-inthanethi - ebizwa ngenkinobho yemenyu ehambisanayo, itholakala ekhoneni elingezansi kwesokudla sesayithi;
ithikithi - ungakha ithikithi ngenkinobho"Yokusekela" yemenyu ephezulu;
i-imeyili - kufanele uthumele isikhalazo kuphela koxhumana nabo abakhonjiswe kuwebhusayithi yekhasino.
Ngaphambi kokuxhumana nensizakalo yokusekela, kunconywa ukuya esigabeni se-FAQ. Sekuvele kunezimpendulo ezilungiselelwe zemibuzo edumile lapha.
Abavakashi besiza babona isimo esimnandi se- indawo esemthethweni kanye nendawo ekahle yamabhulokhi ayo asebenzayo. Amabhanela agqamile amiselana, abonisa izivakashi namalungu abhalisiwe eklabhu ye FastPay Casino lonke ulwazi oludingekayo, kanye nokuvusa intshisekelo kulokho okwenzeka ngaphakathi kwezindonga zalo ezibonakalayo.
Ikhasi eliyinhloko linezinkinobho zokubhalisa, izinkinobho zokungena kanye namathebhu emenyu. I-interface enamaqoqo enengqondo yenza kube lula ukuthi nabaqalayo bazulazule. Abagembuli abavela emazweni ahlukene bazozizwa bekhululekile emakhasini ayo, ngoba isetshenziselwe inombolo enkulu yezilimi ezahlukahlukene:
ISpanish, iSweden, isiNorway, isiFinnish, isiMalay, isiKazakh, isiTurkey, isiFulentshi, isiCzech, isiJapane nezinye eziningi azibalulekile kangako.
Isitayela se indawo esemthethweni ye-Fastray ihlukaniswa ngemibala egqamile, ngakho-ke iyajabulisa. Ukuntuleka kolwazi olungadingekile nedizayini enhle kukuvumela ukuba ubalekele ngokushesha ezinkingeni zansuku zonke, ungene shí ezinhlobonhlobo zokuzijabulisa zokugembula.
Ikhasino linikeza izindlela eziningi zokufaka nokukhipha ama-winnings. I-FastPay isebenza ngezinhlobonhlobo zezimali, kufaka phakathi ama-cryptocurrensets - EUR, NOK, CAD, AUD, NZD, PLN, JPY, ZAR, USD, BTC, BCH, ETH, DOGE, LTC. Iklayenti ngalinye elisha kufanele likhethe imali eyisisekelo ye-akhawunti ngesikhathi sokubhalisa. Uma amadiphozi alandelayo enziwe ngohlobo lwemali oluhlukile, khona-ke ukuguqulwa okuzenzakalelayo kuzokwenziwa.
Iningi lediphozithi ku-FastPay lifakwa ngaphandle kwekhomishini, ngaphandle kwesikhwama se-elektroniki seWebMoney. Ezimweni ezingaphezu kwezingu-80%, imali ifakwa ku-akhawunti khona manjalo - ngokushesha ngemuva kokufaka umdlali isidlali angabheja.
Izindlela zokufaka i-akhawunti yomdlalo:
amakhadi asebhange - i-Visa, i-Maestro, i-Mastercard;
izikhwama ze-e - EcoPayz, Neteller;
izaphulelo - EcoVaucher njll.
Sekukonke, ikhasino inikeza izinketho eziyi-18 zokufaka Imikhawulo yokugcwaliswa kabusha ihlukaniswa ngokuthembeka, ikuvumela ukuthi udlale noma ngabe nesabelomali esincane - 10 USD, 10 EUR, 0.05 BCH, 4400 DOGE, 0.025 ETH, 0.001 BTC, 0.02 LTC, 102 NOK, 15 CAD, 15 AUD, 16 NZD, PLN 45, JPY 1285, ZAR 175.
Uhlu lwezinhlelo zokukhokha zokuhoxa ziyafana nezinketho zediphozi. Izinkokhelo zenziwa kungakapheli amahora angu-12-72, kuya ngenani nohlelo lokukhokha. Imikhawulo emincane yokuhoxa iphindwe izikhathi ezi-2 kunenani lediphozi.
Ukukhipha imali kwi-akhawunti, uzodinga ukufeza yonke imibandela yebhonasi (uma umdlali ebamba iqhaza kuphromoshini), hamba inqubo yokuqinisekisa.
Ikhathalogi yokugembula ye-FastPay inikeza imidlalo engaphezu kwezinkulungwane ezimbili kukho konke ukunambitheka. Isayithi linama-slots nama-roulettes avela kubahlinzeki abangaphezu kwama-30:
I-Amatic, i-NetEnt, i-Fantasma;
I-PlaySon, Relax, Igrosoft, Microgaming, njll.
Ikhasino ligxile kumaslots amasha - azikho izikhala ze-retro ezinemidwebo ephelelwe yisikhathi. Ikhathalogu iqukethe imishini yama-slot enamasondo ama-3 no-5, imigqa yokukhokha engu-5 noma ngaphezulu. Isakhiwo ngasinye sinengqikithi yaso, enikezelwe ekwakhiweni, kuzakhi zegeyimu, kwingoma yomsindo.
Izigaba"Thenga Isici" ne-"Bitcoin, ETH, LTC" zifanelwe ukunakwa okukhethekile. Isigaba sokuqala siqukethe imishini yama-slot lapho ungathenga khona ama-round round, esesibili siveza ama-slots anokubheja ngendlela ye-cryptocurrency. Eminye imishini eseFastPay iqukethe ama-jackpots.
Ikhasino linikeza ama-roulettes anhlobonhlobo - amaMelika, amaNorway, ama-auto roulette, njll. Leli qembu lemidlalo limelwe ngumhlinzeki we-Evolution. Umdlali angakhetha itafula elifanele ngokuya ngokuthanda komuntu kanye nemikhawulo.
Uhlelo lwebhasino lekhasino lumelwe okunikezwayo okulandelayo:
Amabhonasi wamakhasimende amasha. Zifakwa kudiphozi yokuqala neyesibili ku-FastPay. Kudiphozi yokuqala, umdlali uthola izimali zebhonasi nama-spin wamahhala, kowesibili - imali yebhonasi kuphela. Inani eliqondile lebhonasi linqunywa ngosayizi wediphozi. Isamba esiphezulu sebhonasi yokuqala ngu-865 NOR, 100 USD/EUR, 0.5 BCH, 1.9 LTC, 44000 DOGE, 127 CAD, 130 AUD, 0.01 BTC, 1511 CAR, 0.25 ETH, 10670 JPY, 374 PLN ... Ubukhulu besibili buphinda izikhathi ezimbili. Ungasebenzisa umnikelo wokwamukela kanye kuphela.
Uhlelo lokuthembeka. Siqukethe amazinga - ukufeza ngamunye udinga ukuqoqa amaphuzu isimo. Babongwa ngokubhejela kwimishini yama-slot nakweminye imidlalo. Uhlelo lokuthembeka luthinta inani lamabhonasi atholakalayo. Ngokufinyelela ezingeni elisha, umdlali uthola ama-spins amahhala ayi-15 kuye kwangama-500.
Fastpay yiphrojekthi ethokozisayo okufanele icatshangwe yibo bonke abalandeli bezokugembula. Ikhasino inikeza konke okudingayo ngesikhathi esithandekayo, ukucwiliswa emhlabeni wezokugembula. Abadlali balindele ukuzijabulisa kwezinga eliphezulu kwezokugembula, izinkokhelo ezisheshayo, iwebhusayithi elula, inani elikhulu lamabhonasi nohlelo lokuthembeka olunenzuzo. Isimo kuphela ukuthi abantu abadala kuphela abangabhalisa kusayithi.